प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना चुहाउने सचिव को हुन् ? - Nepal Face
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना चुहाउने सचिव को हुन् ?
वैशाख ६, २०७९ मंगलबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवमाथि सूचना चुहाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । ती सचिव हुन्–कानुन समूहका धनराज ज्ञवाली । उनले प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयका सूचना अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दिने गरेको तथा प्रधानमन्त्रीको जानकारीबेगर नै बिचौलियाहरुको डिजाइनमा ठूला ठूला सेटिङमा समेत संलग्न रहेको तथ्य खुलेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्मासँग भित्री सम्बन्ध रहेका ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ब्यापारी तथा उद्योगीहरुसँग गरेका भेटघाटदेखि गर्न लागेका कामहरुको अग्रिम सूचना उनले मन्त्री शर्मालाई दिने काम गरेका छन् । हरेक सूचना अर्थमन्त्री शर्मासम्म पु¥याएर प्रधानमन्त्री देउवालाई कमजोर बनाउन सचिव ज्ञवाली लागेको उच्चस्रोतको दाबी छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार फलामे छड उत्पादनका लागि आबश्यक बिलेटको अयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाउनका लागि मन्त्री शर्मालाई उकास्ने योजनाकार पनि सचिव ज्ञवाली नै रहेको स्रोतले बताएको छ । सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर आयातीत बिलेटमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याउने क्रममा ठूलो रकम आर्थिक चलखेल भएको थियो । गएको भदौमा आर्थिक ऐनमा संशोधन गरी बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढाउनका लागि विवादित ब्यापारी सुलभ अग्रवालहरुले सचिव ज्ञवालीमार्फत् नै मन्त्री शर्मालाई विश्वासमा लिएका थिए । विदेशबाट आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बृद्धि गर्दा एकातिर २४ वटा डन्डी उद्योग बन्द हु्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर डन्डीको मूल्य महंगो भएको छ ।
आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बृद्धि गर्दा १ बन्डल डन्डीमा १ हजारदेखि २ हजारसम्म बृद्धि भएको छ । डन्डी उत्पादनका लागि आवश्यक बिलेट स्वेदशमै उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दै विदेशबाट आयात गर्दा अन्तशुल्क बृद्धि गर्नु देख्दा राम्रो काम जस्तो लागे पनि स्टेक होल्डर(छड उद्योगी)सँग छलफल नै नगरी आर्थिक ऐनमा संशोधन गरिएको गुनासो छड उत्पादकहरुले गरेका छन् । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने केही उद्योगीको आर्थिक चलखेलमा उक्त निर्णय भएको थियो, जसमा ५ अर्बकै चलखेल भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यसमा अर्थमन्त्री–ब्यापारी कनेक्सन गराउने सूत्राधार सचिव ज्ञवाली नै भएको स्रोत बताउँछ । यसरी अकस्मात् विनागृहकार्य अन्तःशुल्क बृद्धि गरिंदा राज्यलाई २० अर्ब राजस्व घाटा भएको छ । अरबौं अरब लगानीका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव ज्ञवाली वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा गृहमन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए । उपसचिव प्रमुख हु्ने कानुन महाशाखामा उनकै लागि सहसचिव दरबन्दी सृजना गरिएको थियो । उनी त्यतिबेला छायाँ गृहमन्त्रीका रुपमा चिनिन्थे । प्रहरीका सरुवा बढुवामा उनको हैकम चल्ने गरेको थियो ।
गृहमन्त्रालयमा कानुन महाशाखा प्रमुख भएकै अवधिमा उनी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य पनि थिए । प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य हुँदा एनसेलको पूँजीगत लाभकर छलीमा सहयोग पुर्याएबापत करोडौं लिएर त्यो रकम समेत उनले अष्ट्रेलिया पुर्याउने काम गरेको आरोप छ । उनका सबै परिवार अष्ट्रेलियामै बस्दछन् । उनले पनि अष्ट्रेलियाको पीआर लिएका थिए । तर २०७० मा लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा विदेशी पीआर लिएकाहरु नेपालको कर्मचारी हुन नपाउने कानुन बनाएपछि उनले त्यागेको बताइन्छ । तर उनी बर्षेनी अष्ट्रेलिया जाने गर्दछन् ।
संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालय, गृहमन्त्रालयको सहसचिव हुृँदै दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य भएर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमा अख्तियारले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो, उनले उक्त उजुरी दीप बस्नेत अख्तियार प्रमुख हुँदा तामेलीमा हाल्न लगाए पनि कुनै पनि दिन पुनर्जीवित हुने अवस्था विद्यमान छ । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा ज्ञवालीका बिरुद्ध परेको उजुरी छानबिन भएको थियो । कार्कीले उनीबाट तत्कालीन कम्युनिष्ट नेताहरु र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति के कति छ विवरण लिन ज्ञवालीलाई प्रयोग गरे, तर उनको बिरुद्ध परेको उजुरी तामेलीमा भने हालेनन् । दीप बस्नेत आएपछि सेटिङमा तामेलीमा हालिएको थियो ।
वाम पृष्ठभूमिका भए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको विश्वास नगरी उनलाई कानुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको थिएन । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनको काम भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना अर्थमन्त्रीलाई दिने तथा बिचौलिया र ब्यापारीसँग कनेक्सन गराउँदै फाइदा लिने हुँदैआएको छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट नीतिगत भ्रष्टाचारका योजना बनाएर त्यसबापत बिचौलियाहरुले मन्त्री शर्मालाई गरेको सहयोग एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यमार्फत् सिंगापुरमै ब्यवस्थापन गर्न लाउने कामको समन्वय पनि सचिव ज्ञवालीले नै गर्दैआएको स्रोतको दाबी छ । फलामे छडको बिलेटको अन्तशुल्क बढाउने नीतिगत भ्रष्टाचारको हिस्साको रकम समेत सतिशलाल आचार्यमार्फत् सिंगापुरमै ब्यवस्थापन गरिएकोे स्रोतले बतायो ।
नेपाल दूरसंचार कम्पनी (टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई ल्याउने रणनीतिकार पनि सचिव ज्ञवाली नै भएको बताइन्छ । एनसेलका सतिशलाल आचार्य र सचिव ज्ञवालीको डिजाइनमा शितलनिवासमार्फत् पौडेलको नियुक्ति भएको स्रोत बताउँछ । टेलिकम धरासायी पारी एनसेललाई मात्र नेपालको टेलिकम्युनिकेसनको सिन्डिकेट चलाउन दिनका लागि पौडेललाई ल्याइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसरी राज्यको कार्यकारी तहमा बसेर सूचना चुहाउने सचिवमाथि कारबाहीको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै ससम्मान राखिरहनुपर्ने के बाध्यता सरकारलाई आइलाग्यो, बुझ्न नसकिने बिषय बनेको छ ।
# धनराज ज्ञवाली
खानेपानी मन्त्रालयको बेथितिः ६ महिनामा ३ सचिव फेरिए
पाँच सचिवको सरुवा, भौतिकमा सिग्देल, खानेपानीमा गेलाल, ऊर्जामा तिवारी
५ लाख घु्स लिने मालपोतका हाकिमबिरुद्ध मुद्दा दायर
पुस्तकालयको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबिरुद्ध परेको निवेदन खारेज, २५ करोड घोटाला हुनबाट रोकियो